Umyalelo wexakeka lomlilo ongxamisekileyo wehlathi kunye nesisombululo senkqubo yonxibelelwano
I-China lilizwe elinobutyebi obuncinci behlathi. Umgangatho wokugawulwa kwehlathi kunye nepropita nganye ingaphantsi komndilili wehlabathi. Kwangelo xesha, iChina ikwindawo enomlilo omkhulu. Oko kwasekwayo eli lizwe, umyinge we-12,000 yemililo eyenzeka rhoqo ngonyaka. Ngaphezulu kweehektare ezingama-700,000. Ukukhusela amahlathi kunye nemeko-bume yezendalo iyeyona nto iphambili kuluntu lwanamhlanje.
Uninzi lwezixhobo zasehlathini zase China zifumaneka kwiindawo ezikude zentaba, kwaye zibonakaliswa kukuqina okuqinileyo kunye nendawo enkulu yecandelo. Ukongeza, iziseko zonxibelelwano kwiindawo ezininzi ziphantse zangabikho nto. Ayisiyiyo kuphela nje kuphela ukuba kukho inkqubo yokunxibelelana eneengcingo zomhlaba, kodwa akukho nxibelelwano ngaphandle kwamacingo. Inkqubo, eya kuthi ikhokelele ekusileleni ukufumana umthombo oyingozi kwaye ibeke indawo eyingozi kwindawo yokuqala ukuba kwenzeke ingozi yentlekele. Ixesha elide, ukusekwa kwekomkhulu elingaphambili lokulwa imililo kunye neearhente zokulawula umlilo kumahlathi kuwo onke amanqanaba kube yingxaki enkulu yomsebenzi wokuthintela umlilo ehlathini.
Kwimeko yomlilo ngequbuliso, inkqubo yokunxibelelana noluntu inokuba yonakele kwaye ingasakwazi ukufezekisa iimfuno zokuphatha imicimbi yexesha likaxakeka. Ukuphendula kule ngxaki, i-Intanethi kwi-Intanethi isungule iseti yezisombululo zendlela yokuhambisa ngaphambili ezinokufika ngokukhawuleza kwindawo yesigameko kwiimeko zonxunguphalo, ukuseka uthungelwano nonxibelelwano olungxamisekileyo nonxibelelwano olukhawulezayo nolusebenzayo kunye nokuthumela inethiwekhi ukuqinisekisa ngokukhawuleza, ngexesha elifanelekileyo, kwaye ngokuchanekileyo Qokelela ulwazi lwendawo kunye nokubonelela ngolwazi lwexesha lokuthatha izigqibo kwiziko lokuyalela. Inkqubo inamandla okusebenza ngokukhawuleza kunye nobubanzi bokunxibelelana, ine-deployability, sensitivityity, kunye nokusebenza ngokuhlukeneyo, kwaye idlala indima ebalulekileyo ekuphumezeni ukuhlangulwa okungxamisekileyo kwindawo yokuhambisa kunye nokuhambisa umthetho.
I-Kimpok iyila isixhobo esiphathekayo sokunxibelelana ngomlilo senkuni izixhobo ezisekwe kwiimpawu ezikhethekileyo zokuthintela umlilo ehlathini kunye nokudityaniswa namava onxibelelwano olungxamisekileyo olungxamisekileyo ngomlilo ukusombulula ingxaki yokuyalela nokuyalela ngaphambi kokuhlangulwa komlilo. Abahlanguli banokuzisa iibhegi kwindawo yeenkuni ukukhawulezisa ngokukhawuleza ibhokisi yoNxibelelwano ngequbuliso ukufezekisa isigubungelo esiguqukayo seendlela zonxibelelwano ezininzi, ukudibanisa i-satellite, i-trunking intercom, inethiwekhi yabucala 3G, unxibelelwano lwe-IP, ukufikelela ngokukhawuleza kunxibelelwano lwenkxaso kunye nokuthumela komyalelo, khawuleza umise ngaphambili imiyalo yomnwe, kwaye kufezekiswe ukuguquguquka okungakumbi kwabo bacima umlilo. Iyalela kwaye uthumele ukuze uqonde ngakumbi iimeko ezifanayo zomlilo, kunye nokugcina unxibelelwano ngezithuthi zokuyalela ezizihambelayo kunye nekomkhulu lokulawula umlilo nangaliphi na ixesha.
Inkxaso yenethiwekhi yabucala engenazingcingo 3G, 4G
Xhasa i-analog trunk kunye ne-digital trunk intercom
Xhasa iintlanganiso zeqela ezikhawulezayo
Inkxaso yokuguqula inkomfa yesiphelo sendibano
Inkxaso yokudonsa kunye nokwehla
Inkxaso yengcaciso eguquguqukayo yeefowuni zamaqela
Inkxaso yabasebenzisi be-SIP kunye ne-relay docking
Inkxaso eyakhelweyo ibhetri
Ixhasa ukuthwala amatyala
Ixesha lokuposa: Meyi-08-2020